Maalinta: Oktoobar 8, 2018
Degmada Altinordu iyo Xariga Boztepe ee u shaqeynayay saacadaha shaqada ee xilliga qaboobaha ayaa dib loo habeeyay sida ay wax u socdaan. ORBEL A.Ş., oo ah shirkad hoos timaad Dawlada Hoose ee Ordu; dariiqa ay maamusho [More ...]
13-21 waxaa qaban qaabin doona Dowlada Hoose ee Magaalada Kayseri inta u dhaxeysa Oktoobar. Carwada Buugaagta Kayseri, buugaag ayaa loo qaybiyay muwaadiniinta baabuurta nidaamka tareenka. Mustafa Duqa Magaalada Caasimadda [More ...]
Khadadka Tareenka Baaskiilada ee Baaskiilka iyo Roobka Waddada ee Madaxweynaha hortiisa
Maalintii ugu dambeysay ee xerada dhaqanka Kizilcahamam, ee AK Party ay la sameysay xildhibaanka si loo qiimeeyo, waxaa dhacay fadhi su’aalo iyo jawaabo ah. … Kuxigeenka 3 ee Bursa ayaa qaatay sagxadda waxayna kahadleen dhibaatooyinka iyo natiijadooda. Macnaha guud, f Müfit Aydın [More ...]
Nidaamka Cabbitaanka Gawaarida iyo Habka Qaran ee Akcaray
Waxaa adeegsaday Dawladda Hoose ee Magaalada Kocaeli. Khadka tareenka ee Akçaray, oo ay ka shaqeyso Akçaray, wuxuu sii wadaa inuu u adeego dadka Kocaeli ilaa 2017. Akçaray, taas oo guud ahaan ay ku qancaan muwaadiniintu [More ...]
3. Magaca madaarka ayaa caddaynaya
Sida laga soo xigtay macluumaadka uu siiyay tifaftiraha guud ee wargeysyada Hürriyet Vahap Munyar, saynisyahannada 6 waxay u shaqeeyaan magaca garoonka diyaaradaha cusub. Natiijooyinka horudhaca ah waxay muujinayaan in magacyada hoggaamiyeyaasha hadda la bixiyo. Furitaanka garoonka diyaaradaha wuxuu noqon doonaa 29 October. [More ...]
3. Waa maxay kharashka garoonka
Kadri Samsunlu, Maamulaha Shirkadda Maareynta ee Madaarka IGA, 29 Istanbul 3, oo furi doonta Oktoobar. bayaan muhiim ah oo ku saabsan garoonka diyaaradaha. '3. 2.5 Bilyan euro EUROS waxaa loo qoondeyn doonaa qaybta ka-soo-kabashada ee maal-gashiga ay ku jirto la-socodka 'ilaa maanta [More ...]
Jumlada Shirarka ee Corum Isku-duwaha guud ee hoos imaanaya hoggaanka Guddoomiyaha Gobolka Kılıç
Çorumlu, oo leh ilkahiisa iyo ciddigiisa, wuxuu u adkaystay allabaryo aad u weyn, wuxuu abuuray "Oasda warshadaha" Orta Orta ee ku yaal bartamaha Anatolia, wuxuu magaceeda ka dhigtaa "Anatolian Tigers,, iyo dadaalka warshadeed ee ku saleysan samaynta warshad ay leeyihiin ganacsato badan, ekonom. [More ...]
Samsun Mutlaka Birta oo ku xiran waddada Birta ah
Xubno ka tirsan ururka MUSIAD xubno ka mid ah qalbiyadiinna isu yimid iyada oo ganacsatada Canik Duqa Osman Young, ka kililka in dhaqaalaha dunida iyo Turkey ee Samsun cayimista hadafka ah in ay bixiyaan fursado la taaban karo, kuwaas oo fursado qiimeyn wanaagsan ee magaalada [More ...]
TCDD 2. Dhibaatooyinka ay garteen Agaasimaha Guud
Gaadiidka iyo Shaqaalaha Ururka Shaqaalaha Tareenka Abdullah Peker, TCDD 2. Wuxuu sharaxay dhibaatooyinka lagu tilmaamay agaasinka gobolka. Dhibaatooyinka ay aqoonsadeen Ururka Shaqaalaha iyo Shaqaalaha Waddada Tareenka waxay kala yihiin sidan; 1-Security Security Security Zonguldak Station Train Station [More ...]
Iyadoo ay wehelinayaan Wasiir kuxigeenka Gaadiidka Selim DURSUN, Fatih SAYAN iyo Enver İŞKURT oo u yimid inay eegaan oo baaraan natiijooyinka mashruuca ay si wada jir ah u sameeyeen EGO General Directorate iyo ASELSAN ee casriyeynta Ankara Metro. [More ...]
Hawlaha Dhismaha ee laga bilaabay Gebze-Dariga Tareenka
Qoditaanka qadka-tareenka ee laga dhisi doono Kocaeli Metropolitan Municipal ee Gebze ayaa bilaabmay. İlhan Bayram, Xoghayaha Guud ee Dawladda Hoose ee Magaalada, ayaa baaray shaqooyinka goobta ka jira wuxuuna ka helay maamulada macluumaad ku saabsan faahfaahinta mashruuca. Khadka Gebze-Darıca Metro [More ...]
Gaadiidka ugu badan ee Samsun: Gaadiidka
Samsun waa mid ka mid ah magaalooyinka ugu quruxda badan ee raacista taraafikada Badda Madow waa mid ka mid ah waddooyinka ugu doorbididda gaadiidka. Waxaad ku bilaabi kartaa gaadiidka raaxada ee taraamka adigoon lacag badan kubixin magaalada. Dabcan, gaariga xamuulka qaada [More ...]